DEG DEG+DAAWO: Shabaab lagu qabtay Badhan & Dagaal dhimasho sababay oo dhacay.
August 12, 2019 NEWS 1
BADHAN(P-TIMES) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Badhan ee gobalka Sanaag ayaa sheegaya in ay ciidamada ammaanka ee magaaladaas ay gacanta ku dhigeen rag looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin Al- Shabaab, kuwaas oo ka socdaalay magaalada Burco ee gobalka Togdheer, waxaana ay kusoo beegmeen kontorool ay leeyihiin ay ciidamada ammaanka.
Xubnaha la qabtay oo ka soo amba-baxay magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa gaarigii ay wateen lagu joojiyay kantaroolka degmada Badhan balse mid kamid ah oo isku dayay in uu cararo ayaa ciidanku toogasho ku dileen halka saddexdii kale oo isdhibayna la qabtay sid ay xaqiijiyeen mas’uuliyiinta degmada Badhan.
Xubnahan ku eedaysan Al-shabaab oo ka soo jeeda Koonfurta Soomaaliya ayaa sida la xaqiijiyay markii hore waxay ka yimaadeen dhanka Koonfurta iyagoo ka soo wareegay dhinaca Somaliland.
Saraakiisha Amnigu weli faahfaahin kama bixin agabka ay wateen raggan ee lagu soo qabtay inkastoo hadda ay ku xiran yihiin xabsiga magaalada Badhan ee gobolka Sanaag halkaasi oo su’aalo lagu weydiinayo.
Sidoo kale waxaa galabta la aasay ninkii afraad oo ciidanku toogasho ku dileen kadib markii uu isku dayay in uu baxsado.
ANIGU waxaan la jira QABIILISTAHA Eng Maxamed Xaashi Elmi Sababta oo ah; AHLU DIIN WAA HAWLKAR WAA NIN HUFAN oy tuugnimo ka dheer tahay. °Iasagana waxaan dhihi-lahaa; “Maxamedow, Somali làaanteed ISAAQ ma jiraaye, Somali wax u qabo”. WBT